July 2020 - Latest Myanmar News
July 31, 2020 by Latest Myanmar News
မျက်နှာသစ်ရာ ရွတ်ကြပါ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဒုတိယမ္မိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဒုတိယမ္မိ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဒုတိယမ္မိ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ တတိယမ္မိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ တတိယမ္မိ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ တတိယမ္မိ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ကျွန်ုပ်အား မွေးထုတ်ပေးခဲ့သော မိဘနှစ်ပါးတို့သည် ဘေးရန်ခပ်သိမ်းကင်းပါစေ။ ဒေါသခပ်သိမ်း ကင်းပါစေ၊ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ကင်းပါစေ။မိမိကိုယ်ကို ချမ်းသာစွာ ရွက်ဆောင်နိုင်ပါစေသတည်း။ကျွန်ုပ်အား ပညာသင်ကြားပေးကြဖူးသော ဆရာသမားအပေါင်းတို့သည် ….. ဘေးရန်ခပ်သိမ်းကင်းပါစေ။ ဒေါသခပ်သိမ်း ကင်းပါစေ၊ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ကင်းပါစေ။မိမိကိုယ်ကို ချမ်းသာစွာ ရွက်ဆောင်နိုင်ပါစေသတည်း။ ၁။လုံးစုံများစွာ သတ္တဝါ … Read more
သံဃာတော်များ ဘာလို့ ၀ါဆိုကြရသလဲ
သံဃာတေ်ာများနှင့် ဝါဆိုခြင်းအဓိပ္ပါယ် ဝါထပ်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာပါလဲ။ ဘာကြောင့် ထပ်ရတာပါလဲ ? ဝါကပ်တာ(ဝါဆိုတာ)ကဘယ်နှမျိုး ရှိပါသလဲ ? ဘယ်လို ရှင်၊ရဟန်းကပစ္ဆိမဝါ(ဒုတိယဝါ)ကို ကပ်နိုင်ပါတယ် ? ဘုရားရှင်က ဘာ့ကြောင့် ဝါဆိုဖို့ ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့တာပါလဲ ? မေး။ ။ ဝါထပ်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာပါလဲ။ ဘာကြောင့် ထပ်ရတာပါလဲ။ ဖြေ။ ။ ဝါခေါင်လကို ဝါခေါင်လလို့မပြုဘဲ’ဝါဆိုလ’လို့ ထပ်ပြီ့းပြုတာကို’ဝါထပ်တယ်’လို့ခေါ်စမှတ် ပြုကြတာပါပဲ။ အဲဒီလို ဝါဆိုလ နှစ်ထပ်ဖြစ်ရတာမှာလည်းရက် မစုံလတွေကို ပြန်ပြီးအစားပေးသောအားဖြင့် ကောင်းကင်ကနေ သွား ၊ လ သွားနဲ့ ကိုက်ညီစေလိုလို့ပါပဲ။ (မဟာဝါ ဘာသာဋီကာ(ဒု)၊ ၅ ) မေး။ ။ ဝါကပ်တာ(ဝါဆိုတာ)ကဘယ်နှမျိုး ရှိပါသလဲ။ ဖြေ။ ။ ပုရိမဝါ ကပ်ခြင်း၊ပစ္ဆိမဝါ ကပ်ခြင်းလို့ … Read more
ထိုင်းရောက် မြန်မာများအတွက် မုန်တိုင်း အရေးပေါ်သတိပေးချက်
ခရိုင် ၅၄ခုအား မုန်တိုင်းသတိပေးချက် ထိုင်းမိုးလေ၀သဌာနက သတင်းထုတ်ပြန် ၃၁.၇.၂၀၂၀ အဆိုပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်၌ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုသည်ယနေ့(၃၁.၇.၂၀၂၀)မှစတင်ကာ ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသများဖြစ်သည့် နောင်ခိုင်ခရိုင်၊လေ့ခရိုင်၊နွန်ဘူလန်ဖုန်ခရိုင်၊၊ စကဲအိုခရိုင်၊ စူခိုနခွန်ခရိုင်၊ဥဒွန်ဌာနီခရိုင်၊လွယ်အစ်ခရိုင်၊မဟာစာရခမ်ခရိုင်၊ဥဘွန်ရခ်ျဌာနီခရိုင်၊ ဘူရိရမ်ခရိုင်၊လယောင်ခရိုင်၊ချွန်ဘူရီခရိုင်၊တရတ်ခရိုင်တို့အားဝင်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီှးသြဂုတ်( ၁)ရက်နေ့မှ (၄)ရက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံတောင်းပိုင်ဒေသများဖြစ်သည့် ရနောင်းခရိုင်နှင့် ဖန်ငခရိုင်သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သိရသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထက်ဖော်ပြပါ ဒေသများတွင်ရောက်ရှိနေထိုင်ကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားများသတိပြုနိုင်ရန် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ဘန်ကောက် အလုပ်သမားဟစ်တိုင် Unicode ခရိုငျ ၅၄ခုအား မုနျတိုငျးသတိပေးခကျြ ထိုငျးမိုးလဝေသဌာနက သတငျးထုတျပွနျ ၃၁.၇.၂၀၂၀ အဆိုပါသတငျးထုတျပွနျခကျြအရ တောငျတရုတျပငျလယျပွငျ၌ ဖွဈပျေါနသေညျ့ အပူပိုငျးမုနျတိုငျးတဈခုသညျယနေ့(၃၁.၇.၂၀၂၀)မှစတငျကာ ထိုငျးနိုငျငံအရှမွေ့ောကျဒသေမြားဖွဈသညျ့ နောငျခိုငျခရိုငျ၊လခေ့ရိုငျ၊နှနျဘူလနျဖုနျခရိုငျ၊၊ စကဲအိုခရိုငျ၊ စူခိုနခှနျခရိုငျ၊ဥဒှနျဌာနီခရိုငျ၊လှယျအဈခရိုငျ၊မဟာစာရခမျခရိုငျ၊ဥဘှနျရချဌြာနီခရိုငျ၊ ဘူရိရမျခရိုငျ၊လယောငျခရိုငျ၊ခြှနျဘူရီခရိုငျ၊တရတျခရိုငျတို့အားဝငျရောကျမညျဖွဈပွီှးသွဂုတျ( ၁)ရကျနမှေ့ (၄)ရကျတှငျ ထိုငျးနိုငျငံတောငျးပိုငျဒသေမြားဖွဈသညျ့ ရနောငျးခရိုငျနှငျ့ ဖနျငခရိုငျသို့ရောကျရှိမညျဖွဈသိရသညျ။ သို့ဖွဈပါ၍ အထကျဖျောပွပါ ဒသေမြားတှငျရောကျရှိနထေိုငျကွသညျ့ မွနျမာနိုငျငံသားအလုပျသမားမြားသတိပွုနိုငျရနျ … Read more
နွယ်သာကီ (ဆေးပင်) Roses of Sharon,Oleander. ရုက္ခဗေဒ အမည် ။။Nerium indicum Mill. မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ အပြားတွင်ပေါက်ရောက်၏။အပူပိုင်း၊အပူသမပိုင်း၊ရာသီဥတုနှစ်မျိုးလုံး၌ဖြင့်ထွန်းသည်။ ထားဝယ်မြို.့ မှမောင်းမကန်သို့ သွားရာကမ်းခြေမရောက်ခင်ရွာအဝင်လမ်း၌အလှပင်အဖြင့်စိုက်ပျိုးကြသည်။ အသုံးပြုပုံ- (သောက်ဆေးအဖြင့် လုံးဝ မသုံးရေ​ပေပြင်ပလိမ်းဆေး အဖြင့်သာသုံးနိုင်၏။အဆိပ်ပင်ဖြစ်သည်။) ၁။အမြစ်မူန့် ကိုရေနှင့်ဖျော်၍လိမ်းပါက ကင်ဆာနာ ပြည်တည်အနာများနှင့် နူနာရောဂါများပျောက်ကင်း၏။ ၂။ဖျားနေသောသူကို နားတွင်လိမ်းပေးပါက အဖျားပျောက်ကင်း၏။ ၃။အဆိပ်ကိုပြယ်စေသဖြင့် ကင်းကိုက်၊ မြွေကိုက်သောနေရာများတွင် အမူန့် ပြုလိမ်းပေးပါကပျောက်ကင်း၏။ ၄။အမြစ်မူန့်် ဖြင့်ခေါင်းကိုပွတ်ပေးပါက ခေါင်းကိုက်ရောဂါပျောက်၏။ ၅။အမြစ်ခေါက်မူ့န့် ကို ပွေးနာနှင့် အခြားအရေပြားပေါ်ဖြင့်သော ယားနာများတွင် အသုံးပြုနိူင်သည်။ အရွက် ၁။ အရွက်ကိုအမူန့်ပြု၍ ယားနာ၊ပွေးနာများတွင် လည်းကောင်း၊ပြုတ်ရည်ကို အရောင်ကျစေရန်လည်းကောင်း လိမ်းပေးလျှင် ပျောက်ကင်း၏။ ၂။အရွက်ကို အရည်ညှစ်၍ မြွေကိုက်ရာတွင်အနည်းငယ်လိမ်းပေးပါက မြွေဆိပ်ပျောက်ကင်း၏။အခြားအဆိပ်ပြင်းသော … Read more
အသက်ဘေးကြုံလျှင်၊မတရား စွတ်စွဲခံရလျှင်၊ဋ္ဌာနမပြောင်းလိုလျှင် အမြစ်အညွန့်မတွန့်စေရ ယတြာ
အမြစ်အညွန့်မတွန့်စေရ တင်လှူရန် အမြစ်အညွန့် မတွန့််စေရ အညွန့် အခက် အရွက် ပန်း များသည် အကာအကွယ်စွမ်းအား တည်မြဲမှုစွမ်းအား၊ အားကောင်းသည်ဖြစ်၍… ၁ ။ အသက်ဘေးအန္ဒရယ်ကြုံတွေ့ ရင်ဆိုင်နေရသော အချိန်များ.. ၂။ မတရား စွတ်စွဲ လုပ်ကြံခံရခြင်းများကြုံနေတဲ့ အချိန်များ ၃ ။ ရောဂါဝေဒနာ ကြီးမားပြင်းထန် ခံစားနေရသည့် အချိန်များ.. ၄ ။ အန္ဒရာယ်များသည့် အရပ်ဒေသသို့ ရောက်ရှိနေချိန်များ.. ၅ ။ လက်ရှိနေထိုင်ရာ အိုးအိမ် ၊ လုပ်ငန်း ၊ ဋ္ဌာနတို့မှ မပြောင်းမရွှေ့လိုပဲ တည်မြဲလိုသည့် အချိန်များ.. ၆ ။ ရန် ၊ ဘုမ္မိ ၊ မရဏ ၊ ဘုမ္မိကြီးကဲ့သို့ ဂြိုဟ်ဆိုး ကိန်းဆိုး … Read more
သွားကိုက်ခြင်းကို(၁)မိနစ်အတွင်း သက်သာစေမယ့် အိမ်တွင်းနည်းလမ်းများ..၊ (၁)ဆားပြုတ်ရည် ဆားသည် သဘာဝပိုးသတ်ဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပြီး သွားကိုက်ခြင်းအတွက် လွယ်ကူပြီးအစွမ်းထက်သော နည်းတစ်မျိူးဖြစ်ပါတယ်..။ ဆား စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဝက်ကို ရေနွေးတစ်ခွက်ထဲသို့ထည့်ပါ။ထို့နောက် ပလုတ်ကျင်းဆေးရည်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ သွားကိုက်ခြင်းကို..၊ သက်သာစေပြီး သွားဖုံးယောင်ခြင်းနဲ့ လည်ပင်းနာခြင်းကိုပါ သက်သာစေပါတယ်..။ (၂)ဟိုက်ဒရိုဂျင် ပါအောက်ဆိုဒ် သွားချေးများကို ပြောင်စေစေပြီး သွားဖုံးသွေးယိုခြင်းကိုပါ သက်သာစေပါတယ်။ ၃%ဟိုက်ဒရိုဂျင် ပါအောက်ဆိုဒ် ၅စက်ခန့်ကို ရေ ၅၀ ml တွင်ရောပါ။ထို့နောက် ပလုတ်ကျင်းဆေးရည်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..။ (၃)လေးညင်းဆီ ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင် လေးညင်းကို သွားကိုက်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ လေးညင်းမှာ eugenol ဆိုတဲ့ သဘာဝပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိူးပါဝင်တဲ့အတွက် သွားကိုက်စေသော ပိုးများကို သေစေပါတယ်..။ လေးညင်းပွင့်အနည်းငယ်ကို ၀ါးစားခြင်း၊လေးညင်းမှုန့်ကို သွားပိုးပေါက်ပေါ်တွင်အုံပေးခြင်း၊လေးညင်းဆီကိုအစက်ချပေးခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်..။ (၄)ရေခဲကပ်ခြင်း ဘယ်လိုနာကျင်မှုမျိုးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ရေခဲတုံးများကို ပလတ်စတစ်အိတ်တွင် ထည့်ပြီး အဝတ်စဖြင့် … Read more
လက်ဖဝါးပြင်မှ ထူးခြားအမှတ်အသား (၉)မျိုး
အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော လက်ဖဝါးပြင်မှ ထူးခြားအမှတ်အသား (၉) မျိုး အလွန်ထူးဆန်းသော သဘာဝအင်အားတို့သည် လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် သီးသန့်ရှင်သန်လျှက်ရှိရာ ထိုအစွမ်းတို့၏ အံ့ဖွယ်ရာ သတ္တိထူးတို့က လက္ခဏာရှင်ကို စိုးမိုးလျှက်ရှိကြသည်။ ထို့စွမ်းအင်တို့၏ အမှတ်အသားကို လက်ဖဝါးပြင်တွင် သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနပြုရာတွင် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝပြီး လက္ခဏာရှင်ကို ရာနှုံန်းပြည့် ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်ကိုပေးသော အထူးအမှတ်အသားများ ဖြစ်ပေါ်လာပေသည်။ ထိုအမှတ်အသားများစွာထဲမှာ အလွန်အတွေ့များပြီး အမှန်တစ်ကယ်လည်း လူတစ်ယောက်၏ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်ကို ဖန်တီးသော လက်ဖဝါးပြင်မှာ ထူးခြားသော အမှတ်အသား (၉) မျိုးအကြောင်းကို စာရှည်မည်စိုးသဖြင့် အနှစ်ချုပ်တင်ပြလိုပါသည်။ ထူးခြားအမှတ်အသား (၉) မျိုးကတော့ – ၁။အစက်ကလေးများ ၂။စက်ဝိုင်းများ ၃။ကျွန်းသဏ္ဍာန် ၄။လေးထောင့်အမှတ်အသား ၅။သုံးထောင့်အမှတ်အသား ၆။ကြက်ခြေအမှတ်အသား ၇။ခရင်းခွ ၈။ရာဇမတ်ကွက်များ ၉။ကြယ်များ စသည်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ၁။အစက်ကလေးများ။ ။ လက်ဖဝါးပြင်တွင် … Read more
ဗိုက်ကြော၊ ပေါင်ကြော ပြတ်ပြီး အသားရေတွန့်ခြင်းတို့အတွက်
ဗိုက်ကြောပြတ် ပေါင်ကြောပြတ်ပီး အသားအရည်တွန့်​နေတာတွေအတွက် ဆေးကောင်းတလက် ကိုယ်တိုင် အရင်ကပေါင်ကြောပြတ်ဖူးလို့ အိမ်မှာလုပ်ပီး အသုံးပြုနေတာ နှစ်နဲ့ချီနေပါပီနော် တကယ်လည်းကောင်းလို့ ပြန်လည်​မျှဝေပေးလိုက်တာပါ ပိုက်ဆံမကုန်ပဲထိရောက်တဲ့ ဆေးလေးပါ ကိုယ်ဝန်ဆောင်လို့ပဲ ဗိုက်ကြောပြတ်ပြတ် / ဝလာလို့ပဲ ပေါင်ကြောပြတ်ပြတ် ဘယ်လိုအကြောင်းရာကြောင့် ပေါင်ကြောပြတ်ပြတ် ဆေးကောင်းရှိပါတယ်နော်လုပ်ရတာလည်း မခက်ပဲ အရမ်းကို လွယ်ကူ ရိုးရှင်းပါတယ် ရှားစောင်းလက်ပတ်အပင်ကြီးက အနှစ်တုံး ငါးခုခြောက်ခုခန့်နဲ့ အုန်းဆီစစ်စစ် သံပုရာအနည်းငယ်ပဲလိုတာပါနော်။ အုန်းဆီက M150 ပုလင်း တစ်ပုလင်းခွဲလိုပါတယ် သံအိုးတစ်ခုထဲမှာ ရှားစောင်းအနှစ်ချည်းထည့်ပါ အုန်းဆီလောင်းထည့်ပါ အဲ့ဒီအိုးကို မီးဖိုပေါ်တင်ပီး မီးခပ်အေးအေးလေးနဲ့သာ ​ပေးဆူထားပါ မိနစ် 30ခန့် တည်ပီး ရှားစောင်းတွေမဲတဲ့ထိ တည်ပီး မီးဖိုပေါ်မှချကာ ရှားစောင်းအမဲ​တွေကိုဖယ်ပါ ဆီရည်တွေကို ဖန်ဘူးတစ်ခုတည်း လောင်းထည့်ထားပါ အကြေားပြတ်တဲ့နေရာတွေကို ထိုဆီရေဖြင့် အသားထဲ စိမ့်ဝင်အောင် … Read more
ရေနှင့် ဖန်ပုလင်းများ အညီဖြတ်နည်း
ဖန်ပုလင်းများကို ရေဖြင့် ဖြတ်တောက်နည်း ဖန်ပုလင်းတွေကို ရေနဲ့ဖြတ်ပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောရင် သင်ယုံမယ် မထင်ပါဘူး တကယ် ဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့နည်း ကျွန်တော့်ဆီမှာ ရှိပါတယ် ဒီနည်းပညာလေးကို လက်တွေ့ စမ်းသပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပုံလေးတွေပဲ လေ့လာကြည့်ပါ။ သမိုင်း Unicode ဖနျပုလငျးမြားကို ရဖွေငျ့ ဖွတျတောကျနညျး ဇလုံပြည့်အောင် ထည့်စရာမလိုပါ။ရေမျက်နှာပြင် ဖုံးအောင်ထည့်ပါ ဖနျပုလငျးတှကေို ရနေဲ့ဖွတျပွဈနိုငျတယျဆိုတာ ပွောရငျ သငျယုံမယျ မထငျပါဘူး တကယျ ဖွတျတောကျနိုငျတဲ့နညျး ကြှနျတေျာ့ဆီမှာ ရှိပါတယျ ဒီနညျးပညာလေးကို လကျတှေ့ စမျးသပျကွညျ့ခငျြတယျဆိုရငျတော့ ပုံလေးတှပေဲ လလေ့ာကွညျ့ပါ။ သမိုငျး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဘုန်းကြီးတွေကြွလာရင် ခြေသုတ်ပေးတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ
ဘာကြောင့်ခြေသုတ်ပေးရသလဲ အမေး။ ။အလှူအိမ်တွေမှာ… ဘုန်းကြီးတွေကြွလာရင် ဘာလို့ တံခါးဝမှာစောင့်ပြီး ခြေသုတ်ပေးရတာလဲ။ ကိုယ့်ဘာသာသုတ်ရင်ရောမရဘူးလား။ အားလုံးအမြင်ရှင်းအောင် ဖြေကြားပေးပါဘုရား” အဖြေ။ ။ဘုန်းတော်များကြီးများ… အိမ်ကြွလာရင် အိမ်ရှင်က ခြေသုတ်ပေးရမယ် လို့ ပညတ်ချက် မရှိသလို ဘုန်းကြီးများကလည်း မသုတ်ခိုင်းပါဘူး။ ဒါဖြင့် ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်နေတာလည်းဆိုရင် ဒကာ-ဒကာမတွေမှာရှိတဲ့ စစ်မှန်တဲ့သဒ္ဓါတရားကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါလို့ ပြောချင်တယ်။ ဘုရားရှင်က “ကုသိုိလ်မှန်သမျှ ပြည့်စုံအောင်လုပ်ကြ” လို့ မိန့်တော်မူရာမှာ ကုသိုလ်ရနိုင်တဲ့တရား ဆယ်မျိုးရှိတယ်။ ဒါကို ကုသလကမ္မပထ (၁၀)ပါးလို့လည်း ခေါ်တယ်။ ထိုကုသိုလ် ဆယ်မျိုးထဲ မှာ ဝေယျာဝေစ္စ ကုသိုလ်ဆိုတာ ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ရတနာသုံးပါးနဲ့စပ်တဲ့ဝေယျာဝေစ္စ ကုသိုလ်ပါပဲ၊ ဒီဝေယျာဝေစ္စကုသိုလ်ဆိုတာ သီလကုသိုလ်ထဲမှာ ပါဝင်တယ်။ အခုလို အိမ်ကြွလာတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးများကို ခြေသုတ်ပေးတယ်ဆိုတာကလည်း … Read more